Mareykanka oo magacaabay Ergeyga Gaarka ah ee Geeska Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo magacaabay Ergeyga Gaarka ah ee Geeska Afrika
Waaxda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa magacawday ergayga gaarka ah ee Geeska Afrika uqaabilsan, iyadoo xilligan gobolka ay ka taagan yihiin xaalado adag!
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa ayaa bayaan ay soo saartay waxay ergayga cusub ee uqaabilsan Geeska Afrika u magacawday Jeffrey Feltman.
"Magacaabidani waxay hoosta ka xarriiqaysaa sida ay uga go’an tahay Maamulka inuu hoggaamiyo dadaal diblomaasiyadeed oo caalami ah si wax looga qabto dhibaatooyinka siyaasadeed, nabadgelyo, iyo kuwa bini’aadanimo ee ka taagan Geeska Afrika." Ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Jeffrey Felt.an ayaa xilal sare ka soo qabtay Waaxda Arrimaha Dibadda iyo Qaramada Midoobay labadaba, Ergeyga Gaarka ah Feltman wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay ayaa lagu yiri warbixinta inuu la yimaado waayo-aragnimo tobanaan sano ah Afrika iyo Bariga Dhexe, diblomaasiyadda dhinacyada badan, iyo gorgortanka iyo dhexdhexaadinta si loo horumariyo loona fuliyo istiraatiijiyad isku dhafan oo Mareykan wax looga qabto arrimahaas adag ee gobolka ka jira.
Arrimaha sida gaarka ah looga walaacsan yahay ee la doonayo inuu ergayga wax ka qabto waa xaaladda kacsan ee Itoobiya, oo ay ka mid tahay colaadda ka taagan gobolka Tigreega, xiisadaha sii kordhaya ee u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan iyo muranka ka taagan biyo-xidheenka weyn ee dib-u-dhiska Itoobiya.